Mihoatra ny COVID-19: Tsy ny famoahana gazety no vahaolana
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Mihoatra ny COVID-19: Tsy ny famoahana gazety no vahaolana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ankoatra ny COVID-19
Ny sakana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny hotely, ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia mitombo isan'andro. Nahoana? Angamba tsy afaka mahazo vahana ny indostria satria tsy manaiky ny tompon'andraikitra lehibe momba ny mpanjifa ny mpitarika ny indostria. Sahirana izy ireo amin'ny fomba handehanana mihoatra ny COVID-19.
Tsy famporisihana ny vidiny: Manolotra vidiny ambany ny orinasam-pitaterana ary mbola tsy maika ny hamandrika. Sarin'ny trano fandraisam-bahiny mahafinaritra (sy foana) mameno ny boaty boaty fidirana sy ny LinkedIn. Saingy, foana ny trano fandraisam-bahiny. Misokatra indray i Disney ary tsy tototry ny fangatahana famandrihana, maneso ny fiezahana hampiseho mpitsidika faly ny media sosialy.
Fa maninona no tsy mahomby ireo teknikan'ny marketing nentin-drazana ireo? Satria ny fisainana majika an'ny mpitantana orinasa ao amin'ny hotely, ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia mitazona azy ireo hidina amin'ny "inona" ary tsy mahita ny vavahady mankany amin'ny "inona izy ireo". Manohy mino izy ireo fa ny olona dia hamela ny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana ao an-tranony ary hiditra ao amin'ny "tsy fantatra" noho ny mpikarakara mpandihy mpandihy manokatra ny vavahady mankany amin'ny hotely iray, raha am-pireharehana kosa ny mpitantana ny sambo fitsangantsanganana fa manafoana ny buffet izy ireo.
Ny talen'ny orinasa lehibe dia mino fa amin'ny alàlan'ny fanakaramana dokotera sy mpahay siansa lafo vidy, fandaharam-potoanan'ny fivoriana any amin'ny suite executive, ary hifampiarahabana noho ny zava-bitan'izy ireo manokana, dia hilahatra ny mpanjifa ary hanome am-pahavitrihana ny carte de crédit-ny mba ho voalohany milahatra famandrihan-toerana. Sehatra marobe amin'ny indostria no manohy manary dolara an-tapitrisany amin'ny fifandraisan'ny daholobe sy ny dokam-barotra izay mety nahomby tamin'ny taona 2018 sy 2019 fa nianjera tamin'ny 2020.
Tompokolahy sy tompokovavy, mariho, ny làlana mankany amin'ny fahombiazana dia tsy amin'ny làlana alehanao. Araka ny filazan'ny Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ny OMSny talen'ny jeneraly, “Mbola mihombo ny areti-mandringana. Ny isan'ny tranga dia nitombo avo roa heny tao anatin'ny enina herinandro lasa izay. ” Ireo mpitarika indostrialy dia mila mahazo ny fifehezana ny zava-misy vaovao ary hiatrika ny ho avy satria Covid-19 ary ny faharavana noforoniny dia hitanjozotra antsika mandritra ny taona maro.
COVID19. Tsy hiala
Na dia mampihena ny hetahetan'ny vatana vaovao aza ny viriosy ary misy sisintany bebe kokoa hiampitana, dia mbola eo amintsika ihany io viriosy io. Raha tsy COVID-19 - fa ny viriosy na bakteria hafa dia hahita ny lalan-kalehantsika eo amin'izao tontolo izao tsy misy fetra ary hanandrana hamorona korontana sy hanoanana. Inona no hataon'ny indostria hampihenana ny herin'ny aretina hiditra amin'ny mpiasa sy ny vahiny ary amin'ny farany hamorona indostria afaka milamina - na inona na inona fisedrana?
Na dia misy hevitra marimaritra iraisana aza momba ny niavian'ny virus, sy ny fomba fijery marobe momba ny fiparitahany, ny tena eken'ny rehetra dia ny fizarana azy amin'ny ambaratonga tena izy, eo no ho eo ary manokana. COVID-19 dia mandeha an-habakabaka ary mihetsika haingana avy amin'ny olona iray mankany amin'ny namana akaiky, fianakaviana ary olon-tsy fantatra ary, miaraka amin'ny alàlan'ny rafitra HVAC tsy miasa na tsy ampy (mieritreritra hotely, zotram-pitaterana an-tsambo, sambo fitsangantsanganana) dia miparitaka manerana ny efitrano sy suite manontolo ny viriosy. . Ireo molekiola "mitsingevana" izay nozarainay (tamin'ny alàlan'ny kabary, ny fihirana, ny kiakiaka, ny fikitrohaana ary ny kohaka), dia hipetraka amin'ny sehatra (tampon-trano, fikarakarana fikandrana, lambam-pandriana, valizy ary tampon-boaty). Misy porofo ara-tsiansa manaporofo fa ny COVID-19 dia miaina velona sy tsara mandritra ny ora maro sy andro eny amin'ny sehatra ambonimbony.
Paikady azo tanterahina: lamba sy fitaovana fanoherana mikraoba
Fotoana mety indrindra ho an'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria hamarana ny vanim-potoana fisainana majia ary handray ny teknolojia izay nitondra lamba antimicrobial vaovao sy fitaovana fananganana ka ny toerana anatiny rehetra misy fidiran'ny vahiny / mpiasa (izany hoe hotely, sambo fitsangantsanganana, trano fisakafoanana, fisarihana , zaridaina lohahevitra, tranombakoka, fitateram-bahoaka) ary ny mpiasa dia misoroka ny fisorohana sy / na famonoana ny viriosy.
Fashion vs COVID-19
Ny lamaody sy ny siansa dia mety tsy ho mpivady tonga lafatra; na izany aza, maro ny mpamorona, injeniera ary siantifika no tsy miombon-kevitra amin'izany. Eo ambanin'ny glamor sy ny haingon'ireo mpamorona anarana, ny indostrian'ny lamaody dia mandalo fanovana hatrany noho ny teknolojia. Manomboka amin'ny akanjo sy kojakoja vita pirinty 3-D, ka hatramin'ny akanjo vita matematika novolavolaina ho an'ny vehivavy postmastectomy, ny indostrian'ny famolavolana dia nampiasa siansa hamolavolana akanjo ho avy. Ny areti-mandringana dia nanosika ny fanavaozana amin'ny sehatra maro ary ny lamba manohitra ny viral dia afaka manala ny viriosy ary nahazo ny eritreritry ny indostrian'ny lamaody.
Carlo Centonze, Dr. Thierry Pelet mitazona ny prototype voalohany amin'ny sarontava tarehy HeiQ Viroblock NPJ03
HeiQ, mpamorona lamba any Soisa, dia manambatra ny teknolojia antimicrobial sy vesicle volafotsy izay mikendry ireo chromosome matavy manodidina ireo virus ary rehefa mikasika ilay lamba izy ireo dia manimba ilay virus ao anatin'ny minitra vitsy. Ny Albini Group (mieritreritra an'i Kerig, Armani, Ermengildo, Zegna ary Prada) dia nanangona vola tamin'ny lamba antivirus vaovao ary namolavola akanjo mitovy endrika sy tsapa amin'ireo fitaovana lafo vidy hafa. Ny tale jeneraly, Fabio Tamburini, dia nanambara, “Ny zava-misy fa ny fitsangatsanganako dia tsy tsara fotsiny hisorohana ny ketrona, fa miaro ahy amin'ny viriosy… ity dia endrika tena tsara hananana.” Albini no vondrona lamaody lafo vidy voalohany niditra teto amin'ity faritra ity, miaraka amin'i Grado any India sy Sonovia any Israel miaraka amin'ireo orinasa mivarotra fitsaboana mitovy amin'ny akanjo.
Donear (India) dia namorona lamba fanoherana ny viralina izay mahomby 99.99 isan-jato raha oharina amin'ny COVID-19. Mampiasa ny teknolojia Neo Tech ny orinasa, manome ampinga fanoherana ny bakteria sy ny viriosy miorina amin'ny HeiQVibroblock NPJO3 ary anisan'ny teknolojia lamba voalohany voaporofo sy voaporofo fa mahomby amin'ny SARS CoV2. Ny vokatra dia mamono ireo viriosy sy mikraoba ao anatin'ny minitra vitsy, mampihena be ny mety ho fandotoana. Notsapaina sy voamarina amin'ny laboratoara malaza eran'izao tontolo izao, anisan'izany ny ISO 18184 haingana indrindra. Ny teknolojia dia ampiasaina amin'ny poly-viscose sy lamba ratsy indrindra izay misy virus matetika mandritra ny 2 andro; na izany aza, ity fitsaboana ity dia mamono azy ao anatin'ny minitra vitsy tsy misy vokany ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Ny vokatra dia azo alaina amin'ny marika Grado, OCM ary Donear.
Ny Copper Company, orinasa kely tohanan'ny mpitrandraka varahina any Shily Codelco, dia miasa amin'ny fikarohana sy ny famolavolana lamba marani-tsaina, ao anatin'izany ny nanotechnology mba hampihenana ny aretina, mba hiarovana amin'ny fiparitahan'ny tsiranoka tsy misy rano miaraka amina toetra mampamirapiratra hanehoana ilay olona sy hampihena ny risika fiarovana. , ary koa lamba vita amin'ny moka miaro sy moka.
Mety hahafaty ny haavo ambonin-tany
Resysten dia fanombohana hongroà izay tsy mivarotra afa-tsy vokatra tokana, fonosana miaro izay mamono coronavirus eny amin'ny habakabaka (eritrereto ny tampon'ny counter, fantsom-by, busses, bokotra ascenseur). Mamono viriosy hafa koa izy io, ary koa bakteria sy holatra, ary manakana azy ireo tsy hamokatra amin'ny faritra rehetra ao anatin'izany ny vy, ny lamba ary ny hazo, mitazona ireo fananana miaro azy mandritra ny taona iray.
Tsy manimba ny tontolo iainana sy ny olona ny firakotra ary jiro fotsiny no mampandeha azy. Ny firakotra dia misy oksida metaly maromaro, indrindra ny titanium-dioxides ary rehefa tonga eny ambonin'ny tany ny hazavana dia manondraka ny fizotran-javatra sasany izay miseho amin'ny sosona rivotra manify manodidina azy ny titanium dioxide. Ny radika maimaimpoana dia vokarina avy eo, ary miteraka hidrozenina peroxyde miforona eo amboniny ary manodidina azy ka io sosona manify io dia lasa tsy azo ovaina ho an'ny zavamiaina bitika ary maty. Talohan'ny COVID-19 dia nampiasaina tamin'ny rafitry ny fitateram-bahoaka ny vokatra, ankehitriny, na izany aza dia efa nampidirina amina birao sy toerana malalaka, fivarotana, trano fitsarana, sns.
Orinasa poloney, Sanwil, no nanao fonosana fiarovana ho an'ny fitaovana izay ampiasaina amin'ny vokatra marobe - manomboka amin'ny sofa malefaka ka hatrany amin'ny seza nify, seza fiara, kiraro ary akanjo ho an'ireo mpiady afo. Ny orinasa dia mamolavola Sanmed (vita amin'ny lamba vita amin'ny polyester misy sosona ivelany polyurethane). Ny sosona polyester miaro dia manome tanjaka bonafide manoloana ny rotra, ny ranomaso ary ny punctures ary ny zaitra dia azo nozairina na natambatra.
Polyurethane dia manana fananana miasa ho toy ny sakana amin'ny viriosy sy bakteria ary ny karazany sasany ao Sanmed dia nampanan-karena zeolite volafotsy izay mamono ireo zavamiaina bitika mikasika azy. Ny fitaovana dia manify, malefaka ary malefaka, tsy tantera-drano ary afaka miaina, mora diovina, azo diovina sy hosasana amin'ny 203 degre Fahrenheit ary tsy ho very fananana aorian'ny fanasana. Sanmed dia ampiasaina amin'ny fiarovana PPE sy antiviral hazmat fitoriana ary mitentina 80 isanjaton'ny famokarana. Ny orinasa dia nanamarina ny Belgian Centexbel Institute.
Vittorio Stacchetti, mpiara-manorina sy talen'ny varotra, Aintech
Chile no mpamokatra metaly mena lehibe indrindra eran-tany ary ny governemanta dia manolotra ny fampiasana nanoparticle varahina amin'ny faktiora sy karatra banky mba hampijanonana ny fihanaky ny bakteria. Ho fanampin'izany, ny governemanta dia nampiasa ny vokatra novokarin'ny Aintech Commercial ary, hoy i Vittorio Stacchetti, mpiara-manorina ary mpitantana ara-barotra, ny orinasa dia, "… mirehareha amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanadiovana ny Minisiteran'ny harena ankibon'ny tany noho ny nanoparticle noforoninay tamin'ny alàlan'ny varahina shiliana . Efa nampiasainay izany tao amin'ny trano fonenan'ireo zokiolona, ​​faritra be risika, tranobe monisipaly, tobin'ny mpamono afo, hopitaly ary toerana malalaka ho an'ny daholobe. Mino izahay fa ny nanocopper Shiliana dia fitaovana ilaina amin'ny fanalefahana ny fifindra-monina sy ny fifindran'ny coronavirus eto amin'ny firenentsika sy manerantany. ”
Copptech (Silia) dia orinasa biotech mandefa vahaolana antimicrobial mifototra amin'ny varahina sy zinc ary ampiharina amin'ny lamba, fitaovana fanamboarana, fonosana sakafo ary menaka amin'ny vatana.
Ny University University of Szczecin (Polonina) dia mikaroka loko misy bakteria ho an'ny rindrina misy fiantraikany antivirus. Ireo mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Pittsburgh dia namolavola firakotra lamba azo nosasana izay mandroaka viriosy ary azo ampiasaina amin'ny PPE.
GermCops monina any Delhi dia misy serivisy famonoana otrikaretina izay mampiasa vokatra azo antoka ho an'ny olombelona sy ny biby fiompy izay miorina amin'ny rano sy tsy mirehitra. Mamono otrikaina 99.9 isan-jato izany ary maharitra 30-120 andro. Ny vokatra dia amboarina sy voamarina any Etazonia ary azo ampiasaina amin'ny sehatra izay misy metaly, tsy metaly, vera, taila ary hoditra.
Saumya Lohia Agarwal, Fahasalamana Lohia
Saumya Lohia Agarwal, Lehiben'ny paikady, Lohia Health dia nanapa-kevitra, "… misy lafiny roa amin'ny faran'ny mpamokatra sarontava ho an'ny mpanjifa. Saron-tava N95 - azo antoka fa tsy afaka miaina; saron-tava landihazo - miaina fa tsy azo antoka. Tianay ny olom-pirenena tsirairay hanana zo miaina tsara… ”
Ny Lohia Health dia mamokatra sarontava SilverPRO izay vita amin'ny landihazo 4-milalao ary sarontava tsy ara-pitsaboana namboarina miaraka amina vahaolana vahaolana simika volafotsy manokana hahatonga azy io ho mahomby toy ny saron-tava N95 nefa manana fofonaina; maharitra mandritra ny 30 fanasana; dia 100 isan-jato biodegradable ary mampiasa lamba mitsonika ho an'ny bakteria, fandotoana ary ny sivana vovoka. Hoy i Agarwal: "Miaraka amin'ny firakotra volafotsy amin'ny sosona tsirairay, tsy misy olana raha mikasika ny ivelany ivelany ilay mitafy, tsy toy ny saron-tava N95."
Ny teknolojia Acteev dia namolavola sarontava avy amin'ny nanofiber sy microfiber ao amin'ny tsipika Acteev Biodefend ho toy ny sakana amin'ny mikraoba, poti-drivotra manimba ary famafazana tsiranoka. Ny fitsapana laboratoara dia nanapa-kevitra fa ny teknolojia dia mampiala ny SRA CoV-2 (ny coronavirus izay miteraka COVID-19) sy ny otrikaretina hafa ao anatin'izany ny H1N1 sy ireo viriosy sy bakteria hafa. Ny fanandramana dia natao taorian'ny protokoloky ny ISO, ASTM ary ireo fikambanana iraisam-pirenena hafa. Araka ny voalazan'ny Dr. Vikram Gopal, Lehiben'ny Teknolojian'ny Ascend, "Ny teknolojia teo aloha dia miankina amin'ny fitaovana ao anaty saron-tava mba hitazomana ny vidin'ny herinaratra hahomby amin'ny filtration… Fa rehefa ampiana antimicrobial agents, very tsy ho voatanisa ireo fitaovana ireo ary manomboka tsy mahavita sakana . "
Matory tsy misy fanahiana
Ny volafotsy miaraka amin'ny fananana antimicrobial voajanahary dia napetraka ao amin'ny tady lamba izay miaro ny vahiny amin'ny fifindra-monina virus COVID-19 raha mbola matory izy ireo ary ampiasaina amin'ny tsipika vokatra AllerEase Professional. Amin'ny fampiasana teknolojia HeiQ ny vokatra dia manakana ny mikraoba tsy hiditra ao amin'ny kidoro sy ondana ary sakana manakana ny fitomboan'ny mikraoba.
Avy aiza isika?
Mampientanentana tokoa ny mamaky fa ny trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina ary toeran-kaleha dia dodona ny hamoha ny varavarana sy ny vavahady ho an'ireo mpitsidika; na izany aza, tsy miraharaha ny zava-misy izy ireo fa ny teknolojia nentin-drazana, ny lamba ary ny fitaovana fananganana dia tsy manome sakana amin'ny COVID-19 izay ilain'ny mpandeha ary tadiaviny mba hilamina sy hilamina. Ny COVID-19 dia tsy mamely olona iray fotsiny, mandoto ny namana, ny fianakaviana ary ny vahiny am-polony maro sendra ny lalan'ny diany.
Raha tsy miova (na mandra-pahatongan'ny) indostria ny fanovana ara-dalàna amin'ny fomba fanaovany orinasa, ny hetsika ara-barotra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia tsy handresy lahatra ny mpanjifa fa fotoana mety izao hametrahana ireo raibe sy renibe, dadatoa sy nenitoa, ankizy ary biby fiompy amin'ny seza fiaramanidina na kabine fitsangantsanganana an-tsambo mandritra ny fialantsasatra.
Efa misy ny valin'ny fanamby. Ny dingana manaraka dia ny fampidirana ireo vokatra sy teknolojia vaovao amin'ny orinasa tsirairay ao amin'ny hotely, indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany… avy eo, ary avy eo, dia hisy hafatra azo zaraina amin'ny alàlan'ny fanambarana an-gazety.
Etihad Airways dia nanitatra ny fanamarinana ny antontan-taratasy momba ny dia ...